Madaxweyne Farmaajo oo ka tacsiyeeyey geerida Xildhibaanno ku dhintay Muqdisho – Kalfadhi
Madaxweyne Farmaajo oo ka tacsiyeeyey geerida Xildhibaanno ku dhintay Muqdisho
Madaxweynaha Jamhuriyadda Federaalka Soomaaliya, Maxamed Cabdullahi Farmaajo, ayaa ka tacsiyeeyey geerida laba Xildhibaan, oo shalay ku dhintay magaalada Muqdisho. Labada Xildhibaan ee geeriyootay ayaa midna uu ka tirsanaa Golaha Shacabka, kan kalena Golaha Wakiillada Koofur Galbeed Soomaaliya (KGS).
Madaxweyne Farmaajo waxaa, qoraal uu ku daabacay Barihiisa Bulshada, uu uga tacsiiyey geerida labadan XIldhibaan, oo kan ka tirsanaa Golaha Shacabka lagu magacaabo Axmed Mayow Cabdulle (Korneel Ruush), kan ka midka ahaa Golaha Wakiillada KGS-na la yiraahdo Kheyre Maxamed Axmed.
“Aniga oo ku hadlaya magacayga iyo kan qarankaba, waxaan tacsi tiiraanyo leh u dirayaa guud ahaan shacabka Soomaaliyeed iyo gaar ahaan qoysaska ay ka baxeen Xildhibaan Axmed Mayow Cabdulle (Kornayl Ruush) oo ka tirsanaa Golaha Shacabka iyo Xildhibaan Khayre Maxamed Axmed oo ka tirsanaa Barlamaanka Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed, oo ku geeriyooday magaalada Muqdisho” ayuu Madaxweyne Farmaajo ku yiri qoraal uu soo dhigay.
Xildhibaan Axmed Mayow Cabdulle (Korneel Ruush) waxa uu shalay si kedis ah ugu geeriyooday Muqdisho, sida uu Kalfadhi u sheegay Xildhibaan ay Golaha Shacabka ka wada tirsanaayeen, qaraaba dhawna ay ahaayeen, Cali Yuusuf Cusmaan (Ganey). “Xanuun deg deg ah oo dhinaca wadanaha ah ayuu u dhintay” ayuu Xildhibaankaas ku yiri Kalfadhi.
Xildhibaan Khere Maxamed Axmed waxa uu isna waqtiyadii dambe oo dhan ku xanuunsanaa Muqdisho, xanuunkaas ayuuna ugu dambeyntii shalay isaga oo ku jira isbitaal ku yaala caasamidda sababsaday. Wax faahfaahin ah lagama hayo nuuca xanuunka uu u dhintay.
Dowlad Goboleedka KGS, gaar ahaan Madaxweynaha Maamulkaas, Cabdicasiis Lafta Gareen, ayaa sheegay inuu Marxuumka Illaahey uga baryayo naxariis iyo Janno.
Xukumadda Soomaaliya oo meel marisay Hindisaha Sharciga Maamulka Dakhliga
Miisaaniyadda 2019-ka iyo sida ay Xukumaddu u qoondeysay
Ra’iisul Wasaare Rooble oo la kulmay musharraxiinta iyo Golah Wadatashi oo kulan deg-deg ah yeelan doona
Archives Select Month November 2021 (59) October 2021 (73) September 2021 (40) August 2021 (54) July 2021 (67) June 2021 (60) May 2021 (91) April 2021 (87) March 2021 (106) February 2021 (82) January 2021 (92) December 2020 (107) November 2020 (79) October 2020 (84) September 2020 (107) August 2020 (103) July 2020 (110) June 2020 (62) May 2020 (28) April 2020 (37) March 2020 (44) February 2020 (40) January 2020 (35) December 2019 (55) November 2019 (58) October 2019 (52) September 2019 (74) August 2019 (43) July 2019 (26) June 2019 (60) May 2019 (108) April 2019 (127) March 2019 (143) February 2019 (152) January 2019 (147) December 2018 (162) November 2018 (103) October 2018 (75) September 2018 (58) August 2018 (46) July 2018 (46) June 2018 (39) May 2018 (67) April 2018 (36) March 2018 (4) February 2018 (9) January 2018 (9) December 2017 (8) November 2017 (2) October 2017 (11) September 2017 (6)